Podcast 2x03 ee Actualidad iPad: iOS 9, watchOS 2 iyo wax badan oo badan | Wararka IPhone
Podcast 2 × 03 ee Actualidad iPad: iOS 9, watchOS 2 iyo waxbadan oo dheeri ah
Toddobaad ka dib markii ay timid iOS 9, inbadan oo naga mid ah ayaan horeyba u cusbooneysiinnay qalabkeenna. Waxaan falanqeyneynaa wararka, dareenka ugu horreeya ee nidaamka cusub ee hawlgalka, cusbooneysii dhibaatooyinka iyo barnaamijyada cusbooneysiinta ee dhacayay si loola qabsado macruufka 9 iyo horumarintiisa. watchOS 2 ka dib dib u dhaca bilowga ah ayaa sidoo kale la heli karaa hadda iyo barnaamijyadooda horeyba waa loo cusbooneysiiyey qaababkooda cusub. Intaas oo dhan iyo inbadan oo ka mid ah barnaamijkeena maanta.
Ka dhageyso »2 × 03: IOS 9, watchOS 2 iyo waxbadan oo badan» oo ku saabsan Spreaker.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 2 × 03 ee Actualidad iPad: iOS 9, watchOS 2 iyo waxbadan oo dheeri ah
xog -ogaal dijo
Waxaad xukuntay OS ah oo aadan xitaa fahmin sida ay u shaqeyso, waxaan dhihi karaa gaar ahaan sababtoo ah faallooyinka 'Spotlight lag' ee iPhone 6 +. Weligaa ma istaagtay inaad ka fikirto in marka OS la rakibo ay tahay inuu muujiyo faylasha raadinta dambe? Sidoo kale ma cayimaysid haddii cusbooneysiinta lagu sameeyay OTA ama iTunes. Idinkuna wax kama oranaysid waxyaabaha ku saabsan hagaajinta shaqooyinka badan, kaliya waxaad ka cabaneysaa badhanka gadaal ee u dhexeeya codsi kasta. Waxaan ku rakibay iPhone 6 + mana aanan dareemin wax dib u dhac ah oo la yaab leh.
Waxaan tijaabiyey mid kasta oo ka mid ah betasyada ay Apple sii deysay ee loo yaqaan 'iOS 9' tan iyo bishii Juun, markaa waan ogahay waxa aan ka hadlayo.
Marka laga hadlayo waxaad ka tiraahdo feylasha tusmeynta, waan fahmi karay inay sameysay markii ugu horeysay ee aad rakibtid nidaamka ama aad isticmaasho Astaamaha, laakiin marwalba way dhacdaa. Muddo markii ay dhaaftay ilaa wakhtigii kuugu dambeeyay ee aad isticmaashay, markale ayay dhacdaa, iyada oo aan loo baahnayn in aad dansato qalabka ama aad dib u kiciso. Processor sida 8-bit A64 waa inuu awoodaa inuu qabto shaqooyinkaas isagoon qasan. Waa wax ay tahay inay Apple xalliso oo ay hubaal ku xallin doonto cusboonaysiinta mustaqbalka.
Anigana shaqsi ahaan ayaan kucelceliyay barta xayeysiiska ee nauseam ee aan marwalba dib usoo celiyo, waxaan kugula taliyay in qof walba uu kasoolaabo xoqida, waxaanan marar badan ku idhi Podcast-ka, laga yaabee inuusan kan ahayn laakiin kuwii hore.
Kuwa ugu badan ee lagugula taliyay markaad ka booddo lambarka 7 ilaa 8 ee 8 illaa 9 iyo ka dib markaad raacdo waxaa fiican inaad dib uga soo celiso xoq. Laakiin ma jiro sharci qoran oo sidaas sheegaya iyo haddii aadan ahayn isticmaale JeelBreak (halkaas oo haddii aad jiidi karto dhibaato) wax dhibaato ah kuma jirto in si toos ah loo cusbooneysiiyo.
Ku jawaab iKorum
Sawirro Toos ah oo kujira iPhone 6s ayaa kujira cilad ay Apple horey usameysay
Google wuxuu ku hagaajiyaa "Wallet"-kiisa iPhone iyo iPad